Register Internet Download Manager FREE!! ဒေါင်းလော့စ်မန်နေဂျာအတွက်စိတ်မပူပါနဲ့ !!! | zawthwin(android software/gameနှင့်မြန်မာစာအုပ်စင်) ကိုဇော်သွင်မျှဝေပေးပြီ
Register Internet Download Manager FREE!! ဒေါင်းလော့စ်မန်နေဂျာအတွက်စိတ်မပူပါနဲ့ !!!
Posted on November 19, 2013 by zawthwinကိုဇော်သွင်(စန္ဒယား နှင့် ကီးဘုတ်)	သူငယ်ချင်းတွေတောင်းဆိုတာနဲ့ IDM6.18-7 လေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ဆိုဒ်တော်တော် များများတင်ပြီးသားပါ။ Full မဖြစ်ဘူး Register ပဲဖြည့်ခိုင်းနေတယ်ဆိုလို့ ကျွန်တော်လည်းတင်ပေးလိုက်ရတာပါ။ အခုကျွန်တော် IDM-6.18-7 ကိုပဲ Crack/ register IDM နဲ့အမြဲတမ်း Full ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုပုံလေးတွေနဲ့သေချာရှင်းပြထားပါတယ်။ဒါလေးကိုတင်မလို့မေ့နေတာကြာပြီ စပြီးထွက်တဲ့ 8 ရက်နေ့ထဲကတင်မယ်တင်မယ်နဲ့ တကယ်တန်းတင်မယ်ဆိုတော့သူများဆိုဒ်တွေမှာတင်ထားတာတွေ့တာနဲ့မတင်ဖြစ်တော့တာပါ။ အခုလာအော်နေကြလို့တင်ပေးလိုက်တာပါ။ နောက်ဝင်းဒိုးအသစ်မတင်သရွေ့Full နဲ့ လိုင်စင်အတွက် (100%)အာမခံပါတယ်။ကျွန်တော်ဒေါင်းလော့စ်ဖိုင်ထဲမှာ ပုံတွေနဲ့သေချာရှင်းပြထားပါတယ်။ အထဲမှာလဲ Crack/ register IDM လေးကိုလည်းထည့်ပေးထားပါတယ်။ Internet Download Manager(also known as Idman) is an excellent internet download accelerator that will care of all your downloads from the moment you install it on your PC.
If you want to increase download speed, this tool can help you to increase download speeds by up to5times, resume and schedule downloads.High speed internet connections are common these days, Even if you have the fastest router in the neighborhood, takealook at Internet Download Manager , because it really hasalot to offer.1. Download and install free trial of IDM.
2. Now download crack run downloaded file ‘Keypatch.exe’
3. Now Click ‘Patch Server Check‘, then it will ask for exe file of IDM, so go to C:\_Program Files\_Internet Download Manager and then select IDMan.exe and press open. (Note: Make sure all opened IDM instances are closed before doing this.)If you finish this step correctly, then it will showa‘success message’ under Kill Server check.4. Now your IDM is registered by default withakey, but if you want to register it with your name then first you need to clear previous registration information from IDM. For that press button clear previous registration data.
5.Now open IDM > press yes if it ask you to register IDM > Enter your name, mail id etc. > In Serial key field enter the serial key generated by crack. and press ok.
6. Now you have registered IDM successfully, you can check the registration details from Help > About IDM. Please leave ur comment below if u successfully register or get any problem. thanks အခုဆိုရင် Youtube မှာ ဒေါင်းလော့စ်မန်နေဂျာ လေးကအဆင်သင့်စောင့်နေတာတွေ့ရမှာပါ။ ကျွန်တော်တင်သမျှပိုစ့်တွေ Facebook ကနေရယူချင်တယ်ဆိုရင် ဒီမှာ Like နှိပ်ပါ မန်ဘာဝင်ခဲ့ခြင်းဖြင့် ပိုစ့်အသစ်တင်တိုင်း မိမိ Gmail ထဲကိုတိုက်ရိုက်ရောက်ရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်မန်ဘာဝင်ခဲ့ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင် ဘော်ဘော် တွေကိုထပ်ပြီးရှယ်လိုက်ကြပါ။ Download IDM 6.18 Build7Full !!! www.mm-knowledge.com
This entry was posted in Internet Download Manager. Bookmark the permalink.
← ဖုန်းတိုင်တွေတော့ပေါ်ပါတယ် ဖုန်းခေါ်လိုက်ရင် ဖုန်းတိုင်ပျောက်သွားပြီး ဖုန်းခေါ်မရတဲ့ ပြဿနာလေးပါ	Slow Internet connections သမားတွေအတွက် Youtube Feather အသုံးပြုနည်း →
4 thoughts on “Register Internet Download Manager FREE!! ဒေါင်းလော့စ်မန်နေဂျာအတွက်စိတ်မပူပါနဲ့ !!!”	Sai Yan says:	November 19, 2013 at 12:50 pm	း)
Reply	Sai Yan says:	November 19, 2013 at 12:50 pm	း)
Reply	Thandar Aung says:	November 19, 2013 at 1:39 pm	I got error like this when i press patch server check"Patching failed: can't find the pattern, wait for next release version!" Pls advice me.